CELCELISKA MIISAANKA LUMINTA: FAA'IIDOOYINKA IYO WAXYEELLADA SIDA LOO KARSADO IYO LOO ISTICMAALO - CELERY
Celery waa khudradda oo ah mid gaar ah oo ka kooban maaddooyinka nafaqooyinka, dhammaan qaybahaas oo ah - khudaarta cagaaran, asliga ah iyo cagaarka - waxaa wada baabba'ay nin.
Marka laga soo tago qiimaha nafaqada iyo faa'iidooyinka caafimaad, khudradda xididka leh waxay leedahay hanti qaali ah - isticmaalka joogtada ah wuxuu caawiyaa in lumiyo miisaanka.
Ciriiriga iyo celery-celinta
Khudaarta waxaa ku jira qadar badan oo kala duwan oo fitamiino iyo macaadin, intaa waxaa dheer, waxaa ku jira saliidaha lagama maarmaanka ah, nadiifinta, carotenoids, hilibka. Qiimaha korontada ee celceliska - 15.8 kcal halkii 100 g
Macluumaadka maaddooyinka waxtar leh (ee 100 g): Fiitamiin (100 g): Macdanta (mg / 100 g):
borotiinka - 0.87 g; Iyo - 23 mkg; Ca - 38.5;
carbohydrates - 2.78 g; B1 - 0,018 mg; Fe - 0.18;
sonkorta - 1.28 g; B2 - 0.058 mg; Mg - 12;
fiber - 1.57 g; B3 - 0.317 mg; P - 23;
dufanka - 0.15 g; B5 - 0.238 mg; K - 256;
biyaha - 94.57 g B6 - 0.068 mg; Na - 77;
- B9 - 36 micrograms; Zn - 0.17.
- qalab - 5.78 mg; -
- C - 3.3 mg; -
- E - 0.27 mg; -
- K - 29.02 mcg. -
Ma taqaanaa? Waxaa jira hab aad u fudud oo wax ku ool ah oo lagu ogaan karo tayada iyo casriga ah ee jirridda celceliska: jebiyaan gabal gabal ah - iftiin iftiin leh waa calaamad muujinaysa in khudradda ay cusub tahay. Haddii petiole jabo aamusnaanta, tayada iyo casriyeynta badeecadda ayaa ka baxaysa wax badan oo la rabo, ha iibsan.
Faa'iidooyinka caleenta, xididka, celceliska celceliska
Dhammaan qaybaha khudradda ayaa ilaa xad ah faa'iido u leh kiisaska kala duwan.
Marka hore, u sheeg oo ku saabsan guryaha ugu caansan ee celery:
waxay dhiirigelisaa wareegga dhiigga ee wareegga miskaha, kaas oo gacan ka geysta kordhinta rabitaanka galmada iyo awoodda ragga, marka lagu daro qayb ka mid ah qudaaradu waa werosterone - hormoonka galmada labka ah;
wuxuu leeyahay saameyn la taaban karo oo antiseptic ah;
wuxuu kor u qaadaa dheecaanka casiirka caloosha iyo hagaajinta tayada;
Waxay leedahay saameyn dhexdhexaadin ah oo ku saabsan mareenka dheef-shiidka, iyo saameynta duriinka ee habka kaadida. Intaa waxaa dheer, waxay ka caawineysaa in laga saaro ciid iyo dhagax yar yar oo ka kelyaha;
Sababtoo ah qaybta dhamaystiran ee fitamiinada ee kooxda B, lagama maarmaan u ah hawlaha caadiga ah ee habdhiska dareemayaasha;
waxaa ku jira enzymes oo kicin kara dheefshiidka;
wuxuu leeyahay saameyn faa'iido leh maskaxda iyo dhaqdhaqaaqa jirka;
fiber, taas oo hodan ku ah dhammaan qaybaha geedka, nadiifiyaa mindhicirada;
Khudradda waxaa ku jira wax badan oo sodium ah (4 jeer kalsiyum ka yar), taas oo aad u faa'iido leh dadka ay cunaan cuntadooda ay ka kooban tahay qadar badan oo karbohidraat ah. Haddii ay dhacdo, sabab kasta, waa lagama maarmaan in la yareeyo isticmaalka cusbo miiska cuntada, waxaa lagu beddeli karaa celery;
waxay saaraysaa sunta, sababtoo ah maadada sare ee fiitamiinada A, C iyo E, waa antioxidant aad u fiican, waxay ka hortagtaa samaynta burooyinka;
waxay xoojisaa difaac, waxay kuu ogolaaneysaa inaad si wax ku ool ah ula dhaqanto hargabka, caabuqyada fayruska iyo bakteeriyada;
waxay ka caawisaa madoorowga, waxay caadi u tahay xaalad ah microflora mindhicirka;
sababta oo ah maadada sare ee vitamin K, khudradda ayaa saameyn wanaagsan ku leh dhiig-xinjirowga;
wuxuu leeyahay saameyn sedeer ah, wuxuu ka caawiyaa dhibaatooyinka hurdada.
Waa muhiim! Isticmaalka joogtada ah oo casiir ah oo la jarjaray ee celceliska, kaabajka iyo karootada (1: 1: 1) waxay ka caawisaa in laga saaro HOL inta badan jirka, taasoo ah sababta keentay turjubaanka.
Waa in la sheegaa faa'iidooyinka qaybaha sheyga ee khudradda.
Aynu bilowno xididka:
Inta badan saliidaha lagama maarmaanka ah waxay ku badan yihiin xididka celery-ka. Waa walxahan kuwaas oo caadiyan ka shaqeeya nidaamka habka dhexe ee neerfaha, sidaa daraadeed qaybtan geedka waxaa lagu talinayaa in lagu isticmaalo dadka ay hayso xanuunada hurdada, dareenka daal joogto ah iyo dhibaatooyinka kale ee la xiriira nidaamka dareenka.
Root waxaa loo isticmaalaa daaweynta arthritis-ka, arthrosis, lumbago, boog-galka iyo mindhicirka mindhicirka, caloosha oo leh wax yar kalooriga.
Celery waa qaraabada ugu dhow ee dabacasaha, sidoo kale waxaa ku jira tiro badan oo carotenoids ah (badanaa zeaxanthin iyo lutein), oo leh saameyn togan ku saabsan xubnaha aragtida.
Juice ee xididka (xididka, ma ah stem) waxaa loo isticmaalaa daryeelka ka hortagga timo iyo maqaarka. Iyada oo aad si wax ku ool ah ula macaamili karto xannibaadda, seborrhea, ama si fudud xoojinta timaha.
Root waxay ka caawisaa inay caadi noqoto sonkorta dadka dadka qaba cudurka macaanka.
Waxyaabaha sarreeya ee birta badani waxay keenaysaa dhiig-samaynta, waa waxtar u leh dhiig-yaraanta, waxay caadi u tahay dheelitirka milixda iyo biyaha, taas oo ka caawisa in ay naaqusho barar. Xaaladdani waxay aad u faa'iido u tahay dib u soo kabashada ka dib istaroogga iyo wadnaha wadnaha, iyo sidoo kale haweenka muddada uurka (haddii aysan jirin wax isir ah).
Haatan waxan fiirinaynaa sifooyinka qaybta cagaaran ee khudradda:
Qaybta dhulka ee khudradda (petiole iyo cagaarka), sababtoo ah feejignaanta sare ee fiitamiinada iyo macdanta, waa habka ugu fiican ee lagu ilaaliyo qaabka iyo u buuxiyo xoogagga dadka jir ahaaneed firfircoon.
Celery-celis waxay si gaar ah ugu faa'iideysan kartaa cayaaraha sababtoo ah tayada cuntada iyo waxyaabo kalooriye yar. Kaloori kala duwan oo caloosha ah iyo cocktails ku salaysan waa qayb muhiim u ah nafaqada ciyaaraha.
Cunista khudradda cagaaran waxay wax ku ool u tahay caloosha. Saamaynta macmalka dabiiciga ah waa mid khafiif ah, waxa uu ka qaybqaataa caadada u ah hawlaha caloosha iyo mindhicirka.
Greens leeyihiin saamayn bogsashada: a cadaadis ah canab ah oo canab ah iyo caleemo, codsatay in la gooyay a gooyay, kor u heedhiisa degdeg ah.
Cunista khudaarta waxay kordhinaysaa muddada dheer. Intaa waxaa dheer, dadka isticmaala celery muddo dheer, ma aha oo kaliya ku nool da'da weyn, laakiin sidoo kale xajiya dareen caadi ah iyo xasuus wanaagsan.
100 garaam oo caleemo celis ah waxaa ku jira:
Cows iyo miisaan lumis
Celery waxay u badan tahay khudradda cuntada ugu badan: Marka laga soo tago heerka ugu yar ee kalooriga, qaabkeeda, hodan ku ah fiyuuska, waxay sababtaa habka dheefshiidka caloosha si ay ugu qaataan xoogaa dadaal ah dheef-shiidka. Nidaamka miisaanka luminta waa mid fudud: jidhku wuxuu ku faafaa dheef dhoobo aan caadi aheyn, taas oo hodan ku ah khudradda, tamar badan marka loo eego khudradda lafteeda, taasoo keenta in aad lumiso miisaanka.
Ma taqaanaa? Gabaygii weynaa ee Giriiggii hore, Homer, ayaa laba jeer ku celcelinaya in uu ka shaqeynayo shaqooyinka aan nooleyn: Sida ay Iliad, Myrmidon waxay fardahoodu u daaqaan fardaha cawska. Odyssey, waxaa la sheegay in godka alaabta Calypso uu ku wareegsan yahay beeraha cagaaran.
Intaa waxaa dheer, nafaqooyinka ee halbeegga kiciyay hababka dheefshiidka, baabi'inaya sunta, saxarada saxda ah iyo saamayn laga duro. Taasi waa, su'aasha ah in dadku dhab ahaantii lumiyaan miisaankooda iyagoo cunaya qashin aan xataa u qalmin.
Haddii aad si joogta ah u isticmaasho khudradda cagaaran iyo cagaarka ku jirta karinta, waxaa laguu balan qaadayaa inaad lumiso dhowr rodol. Adiga uma baahnid inaad ku fariisatid cuntada diiriya, adigu naftaada u diyaarso.
Waxay ku filnaan doontaa inaad cuntadaada ku soo celiso caadi ahaan, soo bandhig caarada iyo celceliska celery-ka iyo dhawr xaaladood oo lagama maarmaan ah:
Cuntada ugu danbaysa waa inay ahaataa ugu yaraan 2 saacadood ka hor wakhtiga jiifka;
tag cuntooyinka jajaban: waxaad cuni kartaa inta badan, laakiin waxoogaa yaryar, ha ku soo rogin qaybo ballaaran;
ciribtirka cuntada ama, haddii aadan si buuxda u baabi'in karin, yaree isticmaalka cuntada degdegga ah;
hogaaminaya hab nololeed firfircoon, in badan oo dhaqdhaqaaq ah, tani waxay si gaar ah u tahay runta dadka wakhti badan ku qaadanaya shaqada shaqada fadhiya, baabuur wadista;
Isku day in aad cunto karbohidratka ka yar borotiinada;
Isku day in aad ka tirtirto inta ugu badan ee suurtogalka ah ee ku jirta rootiga cad ee laga sameeyey burka ugu sarreeya, isaga oo badeecad ka beddelaya wax isku dar ah oo ah burcad iyo daqiiqda 1aad, ama xitaa ka sii wanaagsan - cun cun rooti oo dhan.
Waxaa jira cuntooyin badan oo kala duwan, oo ay ku jiraan isticmaalka celery. Haddii ay dhacdo in khudradda ay saldhig u tahay nafaqada, waxaa loo isticmaalaa dhammaan suxuunta, waa mono-diet. Sidoo kale, dalagga iyo xididada caleemo leh waxaa loo isticmaalaa in lagu daro saxanka ugu muhiimsan ee qaabka salad, macmacaan caafimaad leh iyo dhadhan fiican leh (jelly ka celery iyo karamberriga, smoothie leh malab iyo liin).
Faahfaahin dheeraad ah ka ogow waxa la isku daro daaweynta liin, malab iyo celery waa loogu talagalay.
Haddii ay dhacdo in aad go'aansato inaad dooratid ciriiriga celinta miisaan ahaan, waa inaad la tashataa dhakhtarkaaga intaadan bilaabin. Marka hore, waxay ku saabsan tahay dadka qaba dhibaatooyinka kalyaha, sababta oo ah khudradda ayaa leh saameyn dheco.
Waa inaadan ka xishoonin xaqiiqda ah in mono-diet-ku salaysan yahay mid isku mid ah. Ha iloobin in dhammaan qaybaha khudradda la cuno, sidaas darteed, marka aad muujisay qiyaasta, waxaad abuuri kartaa liis kala duwan.
Intaa waxaa dheer, waxaa jira meelo badan oo mowduucyo ah oo aad ka heli karto cuntooyin badan oo aad u karisid khudaar cagaaran oo kala duwan. Si aad si cad u muujiso sida ay u kala duwan yihiin cuntooyinka cuntooyinka ku salaysan celery waxay noqon kartaa, waxaan ku siineynaa maalin qiyaas ah.
Haddii ay ku daneyneyso, Webka ayaad si fudud u heli kartaa cuntooyinka lagu kariyo mid ama mid kale:
Maraq kalluunka. Cuntada koowaad ee cajiibka ah, marka lagu daro dhadhanka aadka u wanaagsan, waxay leedahay waxyaabo badan oo faa'iido leh, nafaqo iyo isla markaa ka hortagga miisaanka.
Poot Pate. Waxaa loo isticmaali karaa sida saxda ah ee ugu weyn ama faafidda xayawaanka. Kaliya halkii rooti cad, isticmaal rooti, ​​rooti rooti ah ama rooti oo dhan.
Salad ee naasaha digaaga iyo jirida celceliska. Waxay leedahay dhadhan asal ah oo cajiib ah, ma jirto wax ka hooseysa "salad" waxyeello leh majones iyo waxyaabaha kale ee aan cuntada ahayn. Saladku waa runtii delicious, oo ku haboon miis madadaalo, halka runtii faa'iido leh.
Caato leh cagaaran khudradda. Saxanka asalka ah wuxuu leeyahay meel wacan, inkastoo aan dhadhan caadi ah lahayn. Sicir kasta oo saafi ah ayaa loo barbar dhigi karaa waxtarnimada miisaanka luminta hilibkaas.
Casiir yaanyo leh liin iyo celin. Hogaamiye dhab ah oo culeyskoodu sarreeyo. Mabda 'ahaan, waxaad cuni kartaa cuntadaada caadiga ah (waxaan ka hadleynaa cunto badan ama ka yar cunto caafimaad leh, oo aan raashin lahayn), si joogta ah u cab cabitaanka noocan oo kale ah, iyada oo loo beddelayo casiir celery, iyo wax cunto ah looma baahna. I rumee, natiijadu waxay kugu yaabi doontaa: bil gudaheed ma ogaan kartid aqoontaada, hab wanaagsan.
Sida aad u aragto, waxaan soo bandhignay liis kala duwan oo loo qaadan karo saldhig u ah horumarinta cuntadaada shakhsi ahaaneed. Tani waa aaladda loo isticmaalo cuntada diinta, taas oo ah, dhammaan cuntooyinka ay ka kooban yihiin celery.
Waa muhiim! Marka la dubayo, kalooriga macmiilka ee celery ayaa labanlaaban, ka dib markii daaweynta kuleylka lagu dhaqo, miraha xididku wuxuu noqdaa laba jeer ka yar kalooriga.
Waxa kale oo aad si fudud u hagaajin kartaa cuntadaada, ka saar alaabooyinka waxyeellada leh ama isku-dhafka ka yimaada kana mid ah isla cabitaanka khudradda cagaaran oo la isku shubay ama isku darka casiir kale.
Marka lagu daro jimicsiga si dhexdhexaad ah (jimicsiga habeenkii 20-25 daqiiqo), tani waxay ku filnaan doontaa in lumiyo dhowr kilo. Ogeeysiiska, inta aad si ficil ahaan ah u bedeli laheyd doorashooyinkaaga cuntada.
Intee in la isticmaalo
Sidaad ogtahay, badanaa mar walba ma fiicna. Bayaanku waa mid ku habboon marka ay timaaddo inta goynta miraha la cuni karo maalin kasta. Maqnaanshaha ka-hortagga, qof leh caafimaad caadi ah maalintii oo aan waxyeello u geysan jidhku wuxuu cuni karaa ilaa 140-160 garaam oo khudaar ah.
Intaa waxaa dheer, cunista khudradda waa in la qaato sida ugu badan (2/3 ee caadada maalinle ah) in la cuno subaxda iyo galabta. Sababtoo ah xaqiiqda ah in alaabtu ay leedahay saameyn yar oo kicinaysa, tiro badan oo ah khudradda xididka ah ee la cuno fiidkii ayaa kaa celin kara hurdo. Haddii ay dhacdo in aad cuntid casiirka celiska, waa inaadan cabin wax ka badan 100 ml maalintii.
Sida loo habboonaado iyo qaabka loo isticmaalo
Celery waa mid waxtar leh qaab kasta, iyadoon loo eegin in ay tahay kuleyl la daaweeyo ama aan lahayn, oo ay ku jirto miisaan lumis.. Dabcan, khudaarta cagaaran iyo petioles waxaa ku jira fiitamiin iyo macdano badan. Dhanka kale, fiber-ka farsameedka ah ayaa xannibaya derbiyada caloosha, haddii kale waxay ilaalisaa dhammaan sifooyinka alaabta cusub. Isku-baddal aad u fiican oo isku dhafan oo cusub.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan sifooyinka casiir celery.
Casiiradani waxay si fiican ula socdaan qoryaha:
orange iyo kuwo kale
Ka jawaabidda su'aasha sida loo habboon yahay iyo qaabka loo isticmaalo khudradda miisaanka lumitaanka, waa in la sheegaa in khudradda cagaaran loo isticmaalo karinta karootada, saladhyada, sida saxan dhinaca ama ka kooban, koorsooyinka ugu muhiimsan. Waa la cunay ceeriin, la kariyey, la dubay ama la dubay. Laga soo bilaabo stem ka sameeyaa casiir, loo isticmaalo saladh, appetizers, karinta kariska.
Cagaarka iyo abuurka ayaa ah xawaare aad u fiican, oo si tartiib tartiib ah u taabtay saxan kasta. Dhammaan waxyaabahaani waxay ka mid yihiin dhirta isku midka ah, dhammaantood waxaa ku jira heerar kala duwan oo gacan ka geysta hagaajinta guud ee jidhka, iyo gaar ahaan miisaanka luminta.
Maqnaanshaha suurtagalka ah ee isticmaalka
Isticmaalida cuntada dhexdhexaad ah, alaabta sida caadiga ah waa loo dulqaadan karaa jirka. Si kastaba ha noqotee, xaaladaha qaarkood waxay noqon kartaa waxyeello.
Xaaladahan waxaa ka mid ah:
boogta, gastritis leh qandho sare leh.
Waxaan kugula talineynaa inaad barato waxyaabo faa'iido leh oo waxyeelo leh oo ah celery ee jirka bini'aadamka.
Haddii ay tahay xaaladdaada kor lagu soo xusay ama qaar ka mid ah cudurrada liiska ku qoran, taasi micnaheedu maahan in khudradda ay tahay mid aad u cayilan. Si kastaba ha noqotee, ka hor intaadan cunin cunto, hubso inaad la tashato takhasusle.
Talooyinka waxtar leh ee dieterka
Haddii aad si dhab ah u go'aansato inaad lumiso miisaan, waa in aad si cad u fahamtaa in mucjigu macnaheedu yahay in la yareeyo miisaanka, wax khatar u ah caafimaadka, ma jiraan. Laakiin cuntada, isticmaalka kaas oo kaa caawin doona inaad gaarto bartilmaameedkaaga, waa, iyo mid ka mid ah kuwan, laga yaabo inay tahay midka ugu waxtarka badan - celery.
Laakiin miisaanka oo lumiya waa, ka sarreeya dhammaan shaqada iyo edbinta. Ma aha wax aad u badan oo ku saabsan shaqada jireed (inkastoo ay tahay mid waxtar u leh miisaan lumis), sida ku saabsan shaqada naftaada iyo ciribtirka caadooyinka xun.
Talooyin kooban oo hoos ku qoran ayaa kaa caawin doona inaad la qabsato shaqada:
diyaariso dhowr qaybood oo ah xidid celery iyo jirid, ha had iyo jeer ha ahaato gacanta. Markaad rabto inaad wax cunto wax cunto ah - ku cuna calal;
isku day in aad ku darto geedo ama khudradda cagaaran si kasta ha ahaato, ha ka baqin inaad tijaabiso;
Haddii aanad haysan wax ka horjeeda, mararka qaar waxaad cuni kartaa khudradda cagaarka ah ee kor ku xusan. Haddii aadan dareemin wax xun, markaa wax walbaa waa fiican yahay. Talooyinkaani waxay si gaar ah ugu faa'iideysan karaan kuwa loo isticmaalo in ay cunaan dareemayaasha.
Waa muhiim! Isku dar ah casiir celery, karootada, orange ama tufaax, waxay si fiican u beddeli kartaa quraacda caadiga ah. Marka hore, quraacda noocaas oo kale ah ma siin doonto dareemo ficil, laakiin tani waxay caado u tahay caado ka dhigashada caloosha cuntada. Xaqiiqatan, isku dar ah cabitaanka casiirku wuxuu leeyahay qiimo nafaqo oo sarreeya, iyada oo caawinaadeeda waxaad ku dhameysan kartaa ilaa qadada ama ugu yaraan ilaa subaxda dambe.
Faa'iidooyinka celery ayaa muddo dheer la ogaa oo aan la shaki gelin karin. Joogitaanka joogtada ah ee asalka iyo cagaarka ee cuntadaada ma aha oo kaliya in aad ka caawiso inaad lumiso miisaanka, laakiin sidoo kale waxay hagaajineysaa jirka guud ahaan.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Celery 2020